Fomba Hiatrehana ny Fiovana eo Amin’ny Vatana | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hindi (Romanina) Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kazakh (Arabo) Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Nzema Népali Oromo Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Brezilianina Tiorka Tiv Tseky Turkmène Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
“Tsy tianay ankizivavy ny fiovana eo amin’ny vatana. Mampijaly ilay izy, maharikoriko, ary mampiady saina. Ratsy daholo ny ankamaroany.”​—Oksana.
“Vetivety eo aho faly, dia avy eo aho malahelo. Tsy haiko raha zavatra ara-dalàna izany ho an’ny ankizilahy, fa izany aloha no nahazo ahy.”​—Brian.
Toy ny hoe mitaingina kalesy amin’ny lalana miaka-midina ianao rehefa mitranga ny fiovana eo amin’ny vatana. Mety hahafinaritra ilay izy nefa koa mety hampahatahotra. Inona àry no hanampy anao hiatrika an’ilay izy?
Nahoana no misy fiovana eo amin’ny vatana?
Miova ny toe-batana
Miova koa ny fihetseham-po
Misy fiovana eo amin’ny vatanao mba hahatonga anao ho lasa olon-dehibe. Miova haingana ny toe-batanao ary mitombo be ny hormonina ao anatinao. Hanampy anao ho vonona ny hiteraka izany.
Tsy midika anefa izany hoe vonona ny hitaiza ianao. Ny fiovana eo amin’ny vatana kosa no amantarana hoe efa lasa olon-dehibe amin’izay ianao fa tsy zaza intsony. Mety hahafaly anao izany nefa mety hampalahelo koa.
Hainao ve? Rahoviana no tokony hanomboka ny fiovana eo amin’ny vatana? Mifidiana taona iray eto ambany:
Valiny: Samy taona anombohan’ny fiovana eo amin’ny vatana ireo rehetra ireo.
Aza manahy be loatra àry raha mbola tsy misy fiovana eo amin’ny vatanao nefa efa kely sisa ianao dia ho feno 15 taona, na hoe efa manomboka ny fiovana eo amin’ny vatanao nefa ianao mbola tsy ampy 10 taona. Tsy mitovy mantsy ny fotoana anombohan’ilay fiovana eo amin’ny ankizy tsirairay, ary tsy afaka mifehy an’ilay izy ianao.
Toy ny hoe mitaingina kalesy amin’ny lalana miaka-midina ianao rehefa mitranga ny fiovana eo amin’ny vatana. Mety hahafinaritra ilay izy nefa koa mety hampahatahotra. Azonao atao anefa ny miatrika an’ilay izy
Lasa mitombo be ianao, ary mety ho hita be izany. Tsy miaraka mitombo anefa ny faritra samihafa eo amin’ny vatanao. Aza gaga àry raha somary mitavozavoza ianao. Hilamina ihany anefa izany rehefa mandeha ny fotoana.
Mbola misy fiovana hafa koa eo amin’ny toe-batana.
Mihalehibe ny filahiana
Maniry volo ny ambany helika, ny ambany foitra, ary ny tarehy
Mihenjana tampoka ny filahiana ary mivoaka tsirinaina rehefa matory amin’ny alina
Maniry volo ny helika sy ny ambany foitra
Manomboka mandeha fadimbolana
Ankizilahy sy ankizivavy:
Mamoaka fofona ny vatana satria mitambatra ny hatsembohana sy ny bakteria.
Soso-kevitra: Tsy ho maimbomaimbo ianao raha misasa matetika, na mampiasa alamo na zavatra hafa tsy mampisy fofona na hatsembohana tafahoatra.
Lasa misy ny mony rehefa misy bakteria tafiditra ao amin’ny fihary menaka ao amin’ny hoditra.
Soso-kevitra: Sarotra ny misakana ny mony tsy hisy. Mety tsy dia hirongatra anefa izy ireny raha misasa tarehy matetika ianao na mampiasa zavatra manadio hoditra.
Miova ny toe-batanao rehefa mitombo be ny hormonina ao anatinao, ary misy vokany eo amin’ny fihetseham-ponao izany. Mety hiovaova be mihitsy aza ny fihetseham-ponao.
“Androany ianao mitomany dia rahampitso ianao tsy maninona. Tampotampoka eo ianao tezitra dia tampotampoka eo kivy ary lasa miafina ao amin’ny efitranonao.”​—Oksana.
Betsaka ny tanora lasa tsy mahazo aina rehefa tonga io fotoana io, satria hoatran’ny hoe mijery sy mitsaratsara an’azy daholo ny olon-drehetra. Vao mainka manampy trotraka an’izany ilay fiovana eo amin’ny bika aman’endrika.
“Akanjo malalaka be no nanaovako tamin’izaho vao nanomboka nitombo, dia niondrikondrika aho rehefa nandeha. Tsy nahazo aina aho sady menatra na dia efa fantatro aza hoe naninona ny vatako no niova. Hafahafa tamiko ilay izy.”​—Janice.
Lasa hafa mihitsy izao ny fahitanao ny ankizivavy, raha ankizilahy ianao, dia hoatr’izany koa ny fahitanao ny ankizilahy, raha ankizivavy ianao. Izany angamba no fiovana lehibe indrindra eo amin’ny fihetseham-ponao.
“Lasa tsy nieritreritra intsony aho hoe mahasosotra daholo ny ankizilahy. Hitako izao hoe misy bôgôsy ihany ry zareo ary tsy ratsy ny hoe raiki-pitia. Lasa nahafinaritra mihitsy aza ny niresaka hoe i ‘Anona tara amin’i Anona.’”​—Alexis.
Misy tanora sasany lasa tia ankizilahy nefa izy ankizilahy, na tia ankizivavy nefa izy ankizivavy. Aza tonga dia mieritreritra hoe ho lasa lehilahy miray amin’ny lehilahy ianao na ho lasa vehivavy miray amin’ny vehivavy, raha mahatsapa hoatr’izany. Matetika mantsy no miova izany fihetseham-po izany rehefa mandeha ny fotoana.
“Nataoko izay hitovizana tamin’ny ankizilahy hafa, dia lasa tara tamin-dry zareo aho. Efa ela be tatỳ aoriana aho vao lasa tia ankizivavy. Tantara efa mivalona izao ilay izaho tia ankizilahy taloha.”​—Alan.
Miezaha hijery lafy tsaran-javatra. Tadidio hoe tena ilainao ny fiovana eo amin’ny vatana. Afaka manampy anao hatoky tena mihitsy aza ny tenin’i Davida mpanao salamo hoe: “Mahagaga sy mahatalanjona ny fomba nanaovanao ahy.”—Salamo 139:14.
Aza mampitaha ny tenanao amin’ny hafa na mifantoka be amin’ny paozinao. Milaza mantsy ny Baiboly hoe: “Ny olona mijery izay hitan’ny maso, fa i Jehovah kosa mijery ny fo.”—1 Samoela 16:7.
Miezaha ho ampy torimaso ary manaova fanatanjahan-tena tsy tapaka. Tsy dia ho kizitina, na hiady saina, na ho kivy ianao raha ampy torimaso.
Aza mifantoka amin’izay zavatra mahakivy anao amin’ny paozinao. Tadidio fa tsy hanara-maso anao akaiky daholo ny olona. Ary na miresaka ny fiovana eo aminao aza ny olona, dia tsy tokony ho sosotra ianao. Hoy mantsy ny Baiboly: “Aza raisina am-po daholo ny teny rehetra lazain’ny olona.”—Mpitoriteny 7:21.
Ezaho fehezina ny fanirianao hanao firaisana mba tsy hahatonga anao hanatanteraka an’ilay izy. Hoy mantsy ny Baiboly: ‘Andosiro ny fijangajangana. Manota amin’ny vatany ihany ny mpijangajanga.’—1 Korintianina 6:18.
Miresaha amin’ny ray aman-dreninao na amin’ny olon-dehibe hafa azo atokisana. Mety hahamenatra izany amin’ny voalohany. Handray soa anefa ianao raha miezaka manao an’izany.—Ohabolana 17:17.
Fehiny: Betsaka ny olana atrehinao rehefa mitranga ny fiovana eo amin’ny vatana. Io anefa no fotoana ahafahan’ny vatanao mitombo. Afaka miezaka hahay hisaina koa ianao, hifehy ny fihetseham-ponao, ary handroso ara-panahy.—1 Samoela 2:26.
Hizara Hizara Ahoana no Hiatrehako ny Fiovana eo Amin’ny Vatako?
ijwyp no. 51